अफिसियलस्तरको बैठक अर्थात जीटीएबारे बैठकः डा. हर्कबहादुर छेत्री – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsअफिसियलस्तरको बैठक अर्थात जीटीएबारे बैठकः डा. हर्कबहादुर छेत्री
अफिसियलस्तरको बैठक अर्थात जीटीएबारे बैठकः डा. हर्कबहादुर छेत्री
October 2, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, कालेबुङ, मुख्य समाचार 0
कालेबुङः प्रशासनबाट जन आन्दोलन पार्टीलाई राजनैतिक कार्यक्रम गर्ने अनुमति थिएन, तर जाप गान्धी दिवसको अवसरमा दलीय कार्यक्रम गर्न चाहन्थ्यो। यति हुँदाहुँदै पनि कालेबुङ जन मैदानमा जापले राष्ट्रपिता महात्म गान्धीलाई स्मरण गरिछाड्यो।
गान्धी जयन्ती मनाउन मेला ग्राउण्ड झरेको मौकामा जाप प्रमुख डा. हर्कबहादुर छेत्रीले केन्द्रको होस् वा राज्य, दुवैले बोलाएको बैठक केवल जीटीएको निम्ति रहेको किटान गरे। नवान्नमा बोलाएको 16 अक्टोबरको बैठकको निम्ति जापलाई निम्तो छैन। यता गृहमन्त्रालयले बोलाएको बैठकसमेत केवल जीटीएबारे रहेको उनको किटान छ।
‘गृहमन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा बैठक अफिसियलस्तरमा हुने भनिएको छ, यो भनेको गोर्खाल्याण्ड होइन, जीटीएबारे नै बैठक हुन्छ भनिएको हो,’ डा. छेत्रीले भने, ‘अफिसियल बैठकमा राजनैतिक निर्णय हुन सक्दैन। यसको अर्थ हो अफिसियलस्तरको बैठकमा गोर्खाल्याण्डको कुरा हुँदैन। यहाँदेखि उता जनताले नै बुझुन्।’
डा. छेत्रीलाई जनताले यी कुरा बुझ्लान् भन्ने लागेको छैन। उनी अनुसार तीन महिनाको तथाकथित आन्दोलनमा जनताले विमल गुरूङ र विनय तामाङ दुवैका क्षमता देखिसकेका हुन्। तर जनता न त जीटीए-2 को विरोधमा सडक उत्रिए न त हानीबाहेक केही नदिने आन्दोलन गरिरहेका विमल गुरूङविरुद्ध। वास्तवमा जनता के चाहान्छन्? डा. छेत्रीले बुझ्न सकेका छैनन्।
‘जनताले विमल र विनय दुवैलाई देखिसकेका छन्, जनता नेतृत्व छनौटमा असक्षम बनेकैले आजको परिस्थिति तयार भएको हो,’ डा. छेत्री भन्छन्, ‘अब जीटीए स्वीकार्ने कि रणनीतिहिन आन्दोलन स्वीकार्ने जनताले नै तय गर्नुपर्छ।’
आन्दोलनः जीटीएबाट शुरु, जीटीएमै खतम
यद्धपि यी दुवै कुरा जनताको हातमा रहेको विकल्प होइन। उनलाई लाग्छ, पूर्ण रणनीतिसहित आन्दोलन भयो भने मात्र टुङ्गोमा पुगिने हो। नत्र जनताले सँधै यस्तै दुःख मात्र पाइरहनेछन्।
‘शुरुदेखि नै आन्दोलन गलत थियो, शुरुमा आन्दोलनको अर्कै कारण थियो पछि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भयो, यो सोचिसम्झी गरिएको आन्दोलन नै थिएन, सफल बन्ने त सम्भावना पहिलेबाट नै थिएन,’ डा. छेत्रीको भनाई छ, ‘जीटीएमा मोर्चाकै बहुमत स्पष्ट पार्न आन्दोलन गरिएको थियो, जीटीएबाट शुरु भएको आन्दोलन जीटीएमा नै पुगेर सकियो।’
दोष कसको त?
आन्दोलन असफल हुनुमा के जाप दायी छैन त? डा. छेत्रीलाई छजस्तो लाग्दैन।
‘जापले त निरन्तर बन्दले केही दिँदैन, नयाँ रणनीति हुनुपर्छ, आन्दोलन दिल्लीमुखी हुनुपर्छ, यसको निम्ति सांसदहरूबाट बहुमत समर्थन लिनुपर्छ, पर्लियामेन्टमा कुरा उठाउनुपर्छ भनेकै हो,’ डा. छेत्रीको स्पष्टिकरण छ, ‘हामीले त गोर्खाल्याण्डको बीलसमेत तयार पारेका हौं, तर कसैले सुनेनन्। न त दलहरूले सुन्यो न त जनताले।’
यद्धपि अझसम्म पनि उनलाई जनतामाथि विश्वास छ। उनलाई लाग्छ, जनताले जापको कुरा कुनै न कुनै दिन बुझ्नेछ र जापले पूर्ण रणनीतिसहितको जनाआन्दोलन गर्नेछ।
Post Views: 4,747
गान्धीको प्रेरणा र अहिंसा
16 को बैठक 19 को खेल
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (24,913)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (23,884)